दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि बुटवल भैरहवा सडक खण्डमा स्पीड ब्रेकर
बुटवल, २२ मंसिर । प्रदेश नं. ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि बुटवल भैरहवा सडक खण्डमा स्पीड ब्रेकर राख्न सुरु गरेको छ । ६ लेनको सडक निर्माण करिव पुरा हुन लागेको भन्दै ठाउ–ठाउमा स्पीड ब्रेकर राख्न लागेको हो
। सडक फराकिलो भए संगै तिब्र गतिमा सवारी हुईकिने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि स्पीड ब्रेकर राखिएको प्रदेश नं. ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरिक्षक माधव बुढाथोकीले जानाकारी दिए ।
तत्कालका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहयोगमा योगिकुटी देखि जानकीनगर चोक सम्म ३ स्थानमा स्पीड ब्रेकर राखिएको छ । जेब्रा क्रस अगाडि स्पीड ब्रेकर राख्न सवारी साधनको गति कम हुने र बाटो काट्ने पैदल यात्रुका लागि त्रास समेत कम हुने भएकाले स्पीड ब्रैकर राखिएको उनले बताए ।
उनले स्पीड ब्रेकर राखेपछि त्यसको प्रभावकारीताको मुल्याङकन पछि संघ संस्थाहरुको सहयोगमा अनेत्र राख्ने बताए । “दुर्घटना कम गराउनका लागि स्पीड ब्रेकर राख्ने तर दुर्घटना भईनै रहे यसको औचित्य हुँदैन” बुढाथोकिले भने–“ यसको प्रयोग प्रभावकारी भए अनेत्र समेत लैजाने योजना बनाएका छौ ।”
योगिकुटी देखि जानकीनगर सम्मका लागि १८ वटा स्पीड ब्रेकर राखिएको छ । चोकमा ९ वटा बाँकी दुई स्थानमा ९ वटा ब्रेकर स्पीड राखिएको हो । सडकमा ब्रेकर स्पीड रहेको स्थानलाई समेत जनाउ दिएर संकेत गरिएको छ । यसले स्पीड ब्रेकर नआउदै चालकलाई सचेत बनाउने छ ।